उत्कृष्ट सुझाव नेतृत्व बारेमा पढ्न चाहनुहुन्छ गर्नेछन् - JobDescriptionSample.org
घर / Tips / उत्कृष्ट सुझाव नेतृत्व बारेमा पढ्न चाहनुहुन्छ गर्नेछन्
उत्कृष्ट सुझाव नेतृत्व बारेमा पढ्न चाहनुहुन्छ गर्नेछन्
याकूब अप्रिल 18, 2016 Tips 1 टिप्पणी 787 दृश्य
के तपाईं कहिल्यै अन्य एक नेता हुन तपाईं अपेक्षित स्थान एक परिदृश्य मा आफ्नो आत्म स्थित छ तर तपाईं उत्पादक नेतृत्व विशेषज्ञता प्रदर्शन गर्न असमर्थ थिए? के तपाईं साँच्चै फेरि अधिक पारित गर्न चाहनुहुन्छ कहिल्यै यदि तपाईं चासो खर्च गर्नुपर्छ. निम्न लेख के यो सहायता आवश्यक तपाईं प्रदर्शन गर्नेछ आफ्नो व्यक्तिगत दैनिक जीवनमा नेतृत्व क्षमताहरु समावेश.
खरीद मा एक अद्भुत नेता हुन, तपाईं इमानदार हुन आवश्यक छ. एक नेता रूपमा, तपाईं एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम मानिसहरू नेतृत्व गर्ने प्रयास बनाउन सक्नुपर्छ. आफ्नो अनुयायीहरूलाई आफ्नो इमानदारिता देख्ने र यो कदर हुनेछ. तपाईं अक्सर आफ्नो मान्छे संग इमानदारी प्रयास गर्नुपर्छ, यसलाई ठीक इमानदारी तिर तिनीहरूलाई प्रभावित गर्नुपर्छ रूपमा.
इमानदारी नेता गर्न vitally महत्वपूर्ण छ. प्रभावकारी नेताहरूले भरोसायोग्य छन्. जब तपाईं नेतृत्वको आफ्नो क्षमताहरु मा सञ्चालन गर्दै, तपाईं लगातार आफैलाई र अन्य व्यक्तिसँग निष्कपट सुनिश्चित. तिनीहरूले निर्भर र तपाईंलाई विश्वास गर्न सक्छौं जस्तै महसुस आउन भने एक मानिस वा महिला लागि धेरै बढी आदर हुनेछ.
आफ्नो नैतिकता एक उत्कृष्ट नेता मा खोल्दै मा एक आवश्यक स्थिति प्रदर्शन. हुन बनाउन छनौट संग comfy हुनेछ केही. तपाईं एक संकल्प तपाईं विरक्तलाग्दो हुनेछ भनेर विश्वास भने, कि मार्गमा जाँदै टाढा राख्न. हुनत त्यहाँ बाहिर त्यहाँ नैतिकता को एक अलग सेट संग पुरुष र महिला हुनेछ, के तपाईंले सही मुद्दा गरिरहनुभएको सकारात्मक हुन छ.
एक धेरै राम्रो उद्यम नेता हुन, तपाईं प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै तरिकामा बस आफ्नो नैतिकता कम गर्न आवश्यक. तपाईं को अनुमोदन छैन पत्ता लगाउन भने के तपाईंको प्रतियोगिता गरिरहेको छ, त्यसपछि यो प्रतिस्पर्धी हुन तैपनि वैकल्पिक मार्ग खोज्न तर अप तपाईंलाई छ. त्यहाँ घट्दै आवश्यकताहरु आफ्नो बिना प्रतिस्पर्धा गर्न प्रविधी हो. तपाईं एक ताजा तरिका बाहिर आंकडा यदि खेलमा रहन, तपाईं सुखी हुन सक्छ.
आफ्नो टोलीको ध्यान साँच्चै एक नेता रूपमा महत्वपूर्ण छ. प्रोत्साहन दिन कसरी पढेको र नेतृत्व व्यक्तिहरूलाई मा प्रेरणा सिर्जना गर्न कठिन कार्य. व्यक्तिगत कार्यहरू मा धेरै लक्ष्य पनि राख्दै एक वैकल्पिक रूपमा, ठीक पूरा गर्न समूह प्रेरित.
बनाउन तपाईंले पूर्ण रूपमा आफ्नो व्यापार को लागि सेट उद्देश्य छ भनेर निश्चित. सबै मानिसहरू लागि गोली मार गर्न सक्छन् केही कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, र एक महान नेता भनेर निर्देशन आफ्नो कर्मियों निर्देशन हुनेछ. तपाईं बस proclamations छैन प्रदान गर्न र आफ्नो पेशा समाप्त छ मान गर्न सक्नुहुन्छ. सबैको प्रगति बारेमा कुरा गर्न महिना उद्देश्य बैठकहरूमा पकड महिना.
तपाईंले केही समय जाँच्न र कार्यस्थल मा मुड र वातावरण आकलन गर्न प्रत्येक दिन प्राप्त गर्नुपर्छ. उनीहरूले साँच्चै महसुस कसरी थाहा अनुमति दिन तपाईँको subordinates केही मा ल्याउन. सिफारिसहरू लागि खुला हुन, सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर हुन सम्बन्धमा fostering मा सञ्चालन र परिमार्जनहरू कुरा.
नेताहरूले भाषण भन्दा धेरै सुन्न. ठूलो नेता हुनुको अरूलाई भन्न के सुनेपछि बारेमा सबै छ. मानिसहरू अन्तर्गत काम गरिरहेको सुन्न. यो तपाईं आफ्नो मुद्दाहरू हुन्छन्. बाहिर आंकडा हरेक कामदार वस्तु जस्तै छ के के भन्दै छ र मान्छे यसलाई कसरी employing छन्. तपाईं मा हैरानी हुन सक्छ तपाईं सुनेर पत्ता कसरी एकदम.
शक्तिशाली नेता आफ्नो कमजोरी र तिनीहरूको बलियो पक्ष बुझ्न. तपाईं सेखी छन् भने, तपाईं असफल हुनेछ. आउट बलियो पार्न चाहनुहुन्छ ठाउँमा विचार तिर्न.
धेरै आफ्नो गल्ती सम्म स्वामित्व. कुनै व्यक्ति राम्रो छ. आफ्नो गल्ती सम्म owning, तिनीहरूलाई सही र तिनीहरूलाई देखि अध्ययन ठूलो नेता को एक उच्च गुणवत्ता छ. तिनीहरूलाई प्रदर्शन गर्नेछ तपाईं मानव हो कि, तिनीहरू जस्तै. विफलता admitting महान् हेर्न सकेन हुँदासम्म, यो नम्र र आदरणीय छ.
जब एक त्रुटि ठाउँ लिन्छ, ठूलो नेता केहि पत्ता लगाउन एक likelihood रूपमा परिदृश्य प्रयोग गर्नेछ, बरु आलोचना गर्न मौका को. को कठिनाई छलफल र कसरी यो सामना गर्न तिनीहरूलाई एक महान सम्झौता समर्थन हुनेछ.
तपाईं सधैं नयाँ नेतृत्व क्षमता पत्ता लगाउन खोजिरहेको विश्वस्त बनाउन. केही पाठ प्राप्त वा राम्ररी नेतृत्व कसरी नयाँ विशेषज्ञता बुझ्न एक विशिष्ट आधारमा कार्यशालाओं जाने. त्यहाँ बुझ्न सामान्यतया नयाँ विधि र वृद्धि गर्न क्षमता हो. आफूलाई कायम राख्न विश्वस्त बनाउन अप-टु-मिति.
कार्मिक आफ्नो नेताहरूले कुशलतापूर्वक कुरा गर्न मान. एक नेता को सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता सुनिरहेको छ. बन्द कर्मचारीहरु लिंदा वा भनेर तिनीहरूले भन्न के सुन्नुहुने छैन मानिरहेको जोगिन. यदि कोही complains, तिनीहरूले भनिरहेका छन् के ध्यान.
ढोका आफ्नो अहम् जाँच, र कहिल्यै चालक तपाईंको दूरी संरक्षण. कहिल्यै कहिल्यै समूह भन्दा आफ्नो आत्म राख्न, हुँदा पनि तपाईं मान्छे को एक समूह प्रमुख हो. प्रयास नगर्नुहोस् आफ्नो आत्म द्वारा सबै पूरा. अन्त मा, आफ्नो चालक तपाईं बनाउन tends वा तपाईं खण्डन के हो, त्यसैले ढुक्क बिल्कुल सबैलाई महत्वपूर्ण महसुस हुन.
राम्रो नेतृत्व दृढ को उपलब्धि गर्न महत्वपूर्ण छ. तैपनि, यदि तपाईं नेतृत्व नियम पहिचान छैन, के तपाईं साँच्चै नेता हुन सकेन महसुस हुन सक्छ. हामी आशा छ कि दुविधा यो पोस्ट द्वारा हल गर्न सकिन्छ.
अघिल्लो प्रमाण टेक्नीसियन अय्यूब विवरण नमूना
अर्को साइट निरीक्षक अय्यूब विवरण नमूना
Pingback: शीर्ष 11 अत्यावश्यक नौकरी साक्षात्कार सुझाव| | मेट्रो